Kedu ihe bụ microbiota eriri afọ? Ndụmọdụ 3 iji meziwanye ya | Bezzia
Nke Torres | 12/10/2021 20:00 | Ndụmọdụ gbasara ahụike
N'ezie, ihe karịrị otu ugboro ka ị nụla gbasara ahịhịa eriri afọ yana mkpa ọ dị ichebe ya iji nwee ezi ahụike. Ọ dị mma, ihe a na -akpọkarị ahịhịa ahịhịa, bụ ihe a na -akpọ n'okwu sayensị dị ka microbiota eriri afọ. Ihe okwu a pụtara bụ isi nchịkọta (nnukwu) nchịkọta ụmụ irighiri ihe na -ebi n'ime eriri afọ.
Ihe mejupụtara microbiota eriri afọ nwere ọtụtụ ijeri microorganisms dị ka nje, nje, fungi, na ọbụna nje. N'ime ọrụ nke microbiota bụ nke banye calcium na ígwè, na -emepụta ume ma na -echebe anyị pụọ na mwakpo site na nje na nje ndị ọzọ nwere ike bụrụ ọrịa. Na mgbakwunye na imezu ọrụ dị iche iche na mmepe nke sistem.
1 Kedu ihe bụ microbiota eriri afọ na kedu ka esi etolite ya
1.1 Otu esi emezi microbiota
Kedu ihe bụ microbiota eriri afọ na kedu ka esi etolite ya
Gut microbiota dị iche na onye ọ bụla, ihe mejupụtara pụrụ iche nke a na -eme n'oge ịmụ nwa. Nne na -ebufe ụdị nje dị iche iche n'oge a na -amụ nwa, site na ikpu na stool mgbe ọ na -abịa nnyefe mmiri. Ma ọ bụ ụmụ irighiri ihe ndị dị na gburugburu ebe a na -abịa nnyefe cesarean. Nke ahụ bụ, microbiota na -amalite ịmalite site na mgbe amụrụ ya.
Agbanyeghị, n'oge ahụ amalite usoro ga -ewe ọtụtụ afọ iji wuchaa ya. N'ime afọ atọ mbụ nke ndụ, ụmụ irighiri ihe mejupụtara microbiota eriri afọ na -agbasa. Na ruo mgbe ha toro, ụdị mgbanwe a na nkwụsi ike a ga -aga n'ihu, nke ọ ga -aka njọ ma na -emebi ka ọ na -eru ntozu okè. Ọrụ nke microbiota dị mkpa yana ya mere ọ dị ezigbo mkpa iji melite ma chebe ya n'oge ndụ.
Ọrụ nke microbiota maka ahụike mmadụ bụ isi, n'eziokwu, a na -ahụta ya dị ka akụkụ ahụ na -arụ ọrụ. Nke a mejupụtara microorganisms na -arụkọ ọrụ na eriri afọ na ọ na -arụ nnukwu ọrụ anọ.
Kwado mgbaze: na -enyere eriri afọ aka na -eri nri dị ka shuga, vitamin ma ọ bụ acids fatty dị mkpa, n'etiti ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa na mmepe nke sistem nri: N'ime oge mbụ nke nwa ọhụrụ na ụmụ ọhụrụ, microbiota ka na -adịghị ike yana usoro nri nri akabeghị aka. Ya mere, a ga -eji nlebara anya pụrụ iche were ya nje nwere ike ịbanye na usoro nwa site na nri, mmiri ma ọ bụ ịkpọtụrụ ebe ruru unyi.
Na -emepụta ihe mgbochi: vesos nje bacteria ndị ọzọ na -eyi egwu ntule na -ebikọkwa na ahụ mmadụ.
Mee ihe nchebe: microbiota eriri afọ na -enyere aka mee ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ gharazie isi ike, nke na -echebe anyị pụọ na nje na nje.
Otu esi emezi microbiota
Enwere ọtụtụ ụzọ iji melite ma mee ka microbiota eriri afọ sie ike, ebe ọ bụ maka imepụta ụdị mmetụta n'obodo a nke ụmụ irighiri ihe, meziwanye ahụike ha ka ha wee nwee ike mezuo ọrụ ha nke ọma. Ụzọ isi meziwanye nsia ahịhịa es nchikota nke ntuziaka ndị a:
na-eri nri: Oriri nke nri eke, na -enweghị ihe na -emerụ ahụ nke nwere ike imebi ahụike nke microbiota. Soro, gaa n'ihu ụdị nri dị iche iche, nke ziri ezi, na -agafeghị oke ebe nri eke juru eju, bụ ụzọ kachasị mma iji lekọta ahụike na ọkwa niile.
Probiotics: Ha bụ ihe oriri ma ọ bụ mgbakwunye nwere microorganisms dị ndụ na -arụ ọrụ iji meziwanye ma na -echekwa ahịhịa eriri afọ.
Ọgwụ mgbochi: na nke a ọ bụ nri nwere a akwa eriri nke na -enye nri maka microbiota eriri afọ.
Ahụ jupụtara na ụmụ irighiri ihe ndị dị ndụ na -ebi n'akụkụ dị iche iche nke ahụ, dị ka ire, ntị, ọnụ, ikpu, akpụkpọ, akpa ume, ma ọ bụ urinary tract. Ihe ndị a dị ebe a n'ihi na ha nwere ọrụ akọwapụtara na nke dị mkpa na nke ọ bụla yana maka iji nwee ezi ahụike ọ dị mkpa ichebe nje bacteria na ahụ. Soro nri nwere mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, yana nri nwere eriri soluble, ebe ọ na -amasị uto na ọrụ nke microorganisms nke microbiota eriri afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Ndụmọdụ gbasara ahụike » Kedu ihe bụ microbiota eriri afọ? Ndụmọdụ 3 iji meziwanye ya